१ करोड बजेटमा चलचित्र आरुसी निर्माण हुने - HKNepal.com - First Nepali Internet Magazine Hong Kong | एचकेनेपाल डट कम
१ करोड बजेटमा चलचित्र आरुसी निर्माण हुने
झण्डै १ करोड लागतमा चलचित्र ‘आरुसी’ निर्माण हुने भएको छ । गणपति फिल्म्सका लागि उदय सुब्बाको निर्देशनमा निर्माण हुन लागेको यस चलचित्र यहि मंसिर १५ गते सुटिङ फ्लोर जादैछ।
त्रिकोणात्मक प्रेमकथामा आधारित भनिएको यस चलचित्रमा इशक राईले हिरोको रुपमा डेव्यु गर्दैछन् । साहारा प्रधान, बिरु गुरुङ र केशव कुमार श्रेष्ठको संयुक्त लगानीमा यो चलचित्र निर्माण हुन लागेको हो।
पेशाले यि तिनै जना व्यापार व्यवसायमा संलग्न छन् । फिल्मको सम्पूर्ण छायांकन ४० दिनमा सक्ने गरी टिम मोफसल निस्कन लागेको निर्देशक उदय सुब्बाले जानकारी दिए।
यो फिल्मको झापा, इलाम, तिर्थुङ, ताप्लेजुङ र सङ्खुवासभा लगायतका स्थानमा छायांकन गरिनेछ । फिल्मको शीर्ष रोलमा नयाँ अनुहारलाई राखिने भएको छ । निर्देशक सुब्बाले कलाकारको विषयमा अगाडि थप्दै भने, ‘अहिले फिल्म मार्केटमा पुराना कलाकारको विकल्पको रुपमा नयाँ कलाकार देखिएका छन्।
नयाँ कलाकार राखेसि केही नयाँपन उनीहरुले दिन सक्छन् । यो समयको माग हो । जसरी अनमोल केसी, प्रदीप खड्का र पल शाह जस्ता नयाँ कलाकारले अहिले मार्केट लिएका छन् त्यसरी नै आरुसीमा पनि अब्बल क्षमता भएका नयाँ कलाकारले स्थान पाउनेछन् ।’ उदयले ३ वर्ष पहिले ‘रेफ्युजी’ दर्शकमाझ दिएका थिए।
चलचित्रमा इशक राई, रमा लिम्बु, सुनिल थापा, सुरविर पण्डित, कला राई, दमन रुपाखेती, बिरु गुरुङ, भूपेन्द्र लिङ्देन लगायतका कलाकारको अभिनय रहनेछ । मौनता श्रेष्ठको पटकथा तथा संवाद रहने यस फिल्मलाई विक्रम डिसीले खिच्नेछन् । बिरु गुरुङको कथा, तारा थापा किम्भेको सम्पादन, राजु किरातीको द्धन्द तथा विकास चौधरी र तारा प्रकाश लिम्बुको संगीत चलचित्रमा रहनेछ । कमल राई र दिनेश पाख्रिनको नृत्य निर्देशन रहने यस फिल्मको गीतमा राजेश पायल राई, दिपक लिम्बु, सुशन लिम्बु र सुम्निमा इङ्नामको स्वर सुन्न सकिन्छ । फिल्मको तीन वटा गीत रेकर्ड गरिसकिएको छ।
आगामी नयाँ वर्ष अर्थात २०७६ सालको वैशाख १ मा ‘आरुसी’ प्रदर्शन हुने निर्माण पक्षले जनाएको छ।
नाट्यकर्मी महासंघले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गरायो
बलात्कारीलाई बचाउन नेताको फोन !
बिष्णु माझीको फेरि आयो अर्को सुपर हिट गीत ‘मान्छे फकाएर आफ्नो हुँदैन’ (भिडियो सहित)
आइडलबाट बाहिरिएपछि उमेश प्रजाको पहिलो गीत सार्वजनिक
म झुपडीबाट आएकी महिला हुँ- इन्दिरा राना (भिडियोसहित)
‘भ्रष्टाचारी ठहरिए टुँडिखेलमा झुन्डिन्छु’
नेपाललाई मनाउने अन्तिम गृहकार्यमा ओली–प्रचण्ड
सन्दीपलाई नखेलाउंदा दिल्लीको नमीठो हार
अमेरिकी जेलमा तीन सय नेपाली
कास्कीमा रवीन्द्रको उत्तराधिकारी खोजिदै..
नेकपा अध्यक्ष दाहाल सुटुक्क सुकुटे रिसोर्टमा
नक्कली ज्वाइँले अमेरिका लैजाने भन्दै ४२ लाख ठगेपछि
रिजु भट्टराई भईन् पहिलो ‘ मिस पथरी शनिश्चरे ‘
फ्रान्समा यो बर्षकै ठूलो कार्यक्रम, यसरी मनाईयो नयाँ वर्ष
टुटलले ३ करोड ४० लाख कर तिर्नुपर्ने, पठाओमाथि छानबिन जारी
सागर आले र मेलिना राईको स्वरमा 'पिरतीमा यस्तै हुन्छ रे'
जहाँ युवतीलाई तानेर दाजुभाईको साझा बेहुली बनाउँछन्...
रिजु भट्टराई भईन् पहिलो ' मिस पथरी शनिश्चरे '
‘लुट्न सके लुट’ गाउने गायकलाई राष्ट्रपतिका अगाडि जान लाज लागेपछि
भिडियो लोकप्रिय सिफारिस
खानेपानी मन्त्री बिना मगरलाई किन लाग्यो यति ठूलो झट्‌का ? (भिडियोसहित)
Trending Now : नेकपा अध्यक्ष दाहाल सुटुक्क सुकुटे रिसोर्टमा